MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း တတိယအပိုင်း (စာချုပ်၏ အနှစ်သာရ)
ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း တတိယအပိုင်း (စာချုပ်၏ အနှစ်သာရ)
ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၃)။
ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်ကအာမခံရမည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံ။
စာချုပ်၏ ရေးသား ဟန်မှာ အသွင် သဏ္ဍာန် အရ ဥပဒေသ ဘွယ်ဖြစ်ရမည် သာမက အနှစ်သာရအရ အစမှ အဆုံး ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို အားဖြစ် စေရပါမည်။ နိုင်ငံ တကာစံထား ချက်များ အခြေခံ တွင်ဥပဒေ အထောက် အကူ ပြုကွန် ရက်မှ လက်ခံထား သော ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အကျ ဆုံးမူ(၁၀) ချက် အနက် နံပါတ် (၅) အချက်မှာ “ဥပဒေကို အတည်ပြု သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းပြည် အဆောက် အအုံများ တို့သည် ဘက်လိုက် ခြင်း မရှိ၊ အဂတိ တရား မလိုက်စား၊ ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားဘဲ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း။” ဖြစ်သည်။
အစိုးရ စာချုပ် အခန်း(၂) အပုဒ် (၂)(ဂ) တွင် ဖေါ်ပြထားသည့်“အပစ်ရပ် နယ်မြေ အတွင်း တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန် ယူ ဆောင်ရွက် ရန်”ဟူသော အချက်မှာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆက်စပ်ထား သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် အခြေခံ အားဖြင့် အရေးကြီး သော်လည်း ယင်းမှာ ဥ ပဒေကို အတည်ပြု သည့် အဖွဲ့အစည်း များ၏ အစိတ် အပိုင်း အနေဖြင့် သာ ပါဝင်သဖြင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး တခု လုံးအား ရဲတပ်ဖွဲ့ တခုတည်း ၏ လက်ဝယ် တွင် သာ စာချုပ် အရ အပ်နှံထား သည့် သဘော မဖြစ်သင့်။ လက်ရှိမြန် မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ ပကတိ အနေ အထားကို ကြည့်လျှင် ပို၍ပင် မသင့်တော်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထိထိရောက်ရောက်တာဝန်ယူစေလိုလျှင် အောက်ပါအချက် (၈) ချက် ကို ဖေါ်ဆောင် ရန် လိုပါမည်။
(၁) လူထုနှင့် နေ့ စဉ်ထိတွေ့ ဆက်ဆံ နေရသော ရဲတပ်ဖွဲ့ သည်လူ့ အခွင့် အရေး ကိုတန်ဘိုး ထား ရုံသာ မက လက် တွေ့ လိုက်နာ ကျင့်သုံး ရန်လိုသည်။ အထူး သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကဲ့သို့ လူ့ အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက် ရာတွင်နံမည်ဆိုး ဖြင့် ဆယ်စု နှစ်များ စွာ တလျှောက် လုံးကျော်ကြား နေသော နိုင်ငံ အတွက်အထူး အရေး ကြီး သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် နိုင်ငံ တကာလူ့အခွင့် အရေးစံချိန် စံညွှန်းများ နှင့် အညီ ဥပဒေကို အတည်ပြု ရမည်။
(၂)၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ၏ ပုဒ်မ ၃၃၈ “နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ အစည်း အားလုံး သည် တပ်မ တော်၏ ကွပ်ကဲမှု အောက် တွင် ရှိရမည်။” ဟူသော ပြဌာန်းချက် ကိုဖြုတ်ရ ပါမည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆို သော် အဆိုပါ ပြဌာန်း ချက် အရ ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် တပ်မတော် ၏ ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိသော ကြောင့်ဖြစ် သည်။
စစ်တပ်က ရွာတွင်း ၀င်၍ ပစ်ခတ် သဖြင့် ကျောင်းသူ ကလေး တဦး သေဆုံးခဲ့ သည့် အမှုတွင် ပြစ်မှုကျူး လွန်သည့် စစ်ကြောင်း မှ တပ်မတော် အရာရှိ များကို ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခြင်း မပြုခဲ့။ ပြောင်းပြန် ပင် စစ်တပ်၏ တိုင်တန်း ချက်ကို လက်ခံ၍ အဆိုပါ ကွယ်လွန် သူကျောင်း သူကလေး ၏ ဖခင်အား တရားစွဲ ဆိုခဲ့ သည်။ ဤ သည်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် တပ်မတော် ၏ ကွပ်ကဲမှု အောက် တွင် ရှိခြင်း ဖြင့်ဆိုး ကျိုး ကိုတိုင်းရင်း သားပြည်သူ များခံစား ရသည့် သာဓက တခုမျှ သာဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ တပ်မတော် စစ်ခေါင်း ဆောင်များ အား မြန်မာ နိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့က အရေးမယူ နိုင်သမျှ ကာလ ပတ်လုံး နယ်မြေရှိ သော တိုင်းရင်း သား ခေါင်းဆောင် များ သည် လည်း အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အရေး ယူမှုကို ခံမည် မဟုတ်။ ကိုယ့်နယ် မြေ တွင်ကိုယ့်တပ် နှင့်နေကြ မည်။ အစိုးရ အဆိုပြု စာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက် သည် စစ်မှန်သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အ တွက် အလုပ်ဖြစ် ဘွယ်မ ရှိ။ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ တရားစီရင် မှုစနစ် တခုလုံး အားပြင်သည့် အခြေခံ တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ ဖွဲ့စည်း တည်ရှိမှု ကို ပါအခြေ အမြစ်မှ နေ၍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှ သာလျှင် ထိရောက် မှုရှိနိုင်သည်။
ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင် စုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေသစ် တွင် အောက်ပါ ပြဌာန်း ချက်မျိုး ကို ထည့်သွင်း ပြီးမှသာ ရဲ တပ်ဖွဲ့သည် လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ် ရောက် လာ နိုင်ဘွယ်ရှိသည်။
“ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံး သည် အရပ်ဘက် အုပ် ချုပ် ရေး အောက် တွင်ရှိစေရ မည်။ ပြည်ထောင်စု တပ် မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသော အရပ်သား ကာကွယ် ရေး ၀န်ကြီး ၏ ကြီးကြပ်မှု အောက်တွင် တာဝန် ထမ်းေ ဆာင်ရ မည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ထောက်လှန်းရေး တပ်ဖွဲ့များ၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နှင့် လုံခြုံမှု ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များ သည် အရပ်သား ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး၏ ကွပ် ကဲမှု အောက်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ရမည်။ ရဲတပ် ဖွဲ့ သည် ဘက်လိုက် ခြင်း အလျှဉ်း မရှိစေရ။”
(၃) ကာချုပ် ကို အရေး ယူနိုင်သည့် မည်သည့် တရား စီရင်ရေး ယန္တယားမျှ မရှိ။၄င်းသည် ဥပဒေ၏ အထက်တွင် ရောက်နေ သည်။ စစ်မှု ထမ်းဆိုင် ရာ ပြစ် မှုကျူး လွန်မှုများ အား အရေးယူ နိုင်ရန် စစ်ခုံရုံး များကိုတပ်တွင်း၌ ဖွဲ့ စည်း စီရင်ကြ လေ့ ရှိသော်လည်း အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားစီရင် ရေး၏ ကြီးကြပ်မှု မှ လုံးဝကင်း လွတ်သည့် စစ် ဘက် ဆိုင်ရာတရားရုံး များ သီးခြား တည်ထောင်စီရင် ခြင်းမှာ ဒီမိုကရေ စီနိုင်ငံကြီး များ၏ အစဉ်အလာ မဟုတ် ပါ။ ယခင် က မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လည်း ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အရ တပ်တွင်း တရားစီရင်ရေး ၌အယူခံ စီရင်ပိုင်ခွင့် အာ ဏာ အားတရား ၀န်ကြီးချုပ် (အရပ် သား ဖြစ်သူ) ကသာ ကျင့်သုံးခဲ့ သည်။ ကာချုပ် ၏ တာဝန် မှာ တပ်မတော် ကို စီမံခန့်ခွဲ ဦးဆောင် ရန်သာ ဖြစ်သည်။ တရားစီရင် ရန်မဟုတ်။ ကာချုပ်က တရားစီရင် ရေး အာဏာ ကျင့်သုံး နေ သမျှ ကာလ ပတ်လုံး ရဲတပ်ဖွဲ့ မည်မျှပင် အားကောင်း ပါစေ ၄င်းကို အရေးယူ နိုင်ဘွယ် မရှိပါ။ ၄င်းကျူးလွန်နိုင် သည့် ပြစ်မှုများ၊ တာဝန်ရှိ နိုင် သည့်ပြစ် မှု များအား စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ တရားရုံး ကို သုံးကာ ဖုံးထား နိုင်၍ ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ဖျက်ရန် လိုသည်။
(၄) တပ်မတော် မှ တိုက်ရိုက် ပြောင်းရွှေ့ လာပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ အတွင်း ရဲယူနီဖေါင်း ပြောင်းလဲ ၀တ်ထားသော အရာရှိ မှန် သ မျှအား တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းရ ပါမည်။ အရပ် သား ဘ၀မှ ရဲသင်တန်း ကျောင်းများ ကိုတက်၊ ရဲလုပ်ငန်း များအား စ နစ် တကျ သင်ကြား ပြီး ရဲတာဝန် အား တောက်လျှောက် ထမ်းဆောင် လာသူများ ကိုသာ အဆင့်ဆင့် ရဲတပ် ဖွဲ့ အ ကြီး အကဲများ အဖြစ်အထက် အမြင့်ဆုံး ပိုင်း အထိ တာဝန် ပေးခြင်း သည်သာ အသင့်မြတ် ဆုံး ဖြစ်ပါမည်။ ယင်း ကို အာဏာရှင် စနစ်၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်မှ ဒီမိုကရေစီ သို့ပြောင်းလဲ သွားသော နိုင်ငံများတွင် တိုင်းပြည် အဆောက် အ အုံ အပြောင်း အလဲလုပ် ဆောင်ခြင်း ဟုခေါ် လေ့ရှိကြ သည်။
(၅) အထက်ပါ အချက်သုံး ရပ်ကို ဖေါ်ဆောင်ပြီး နောက်တွင် အစိုးရ နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း များ ညှိနှိုင်း ကာ ရဲ အနေဖြင့် တာဝန် ယူမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်း သား ပြည်နယ် များရှိ ဒေသဘာသာ စကား ကို တတ်ကျွမ်း သော ဒေသခံ များ အတွင်းမှ နှစ်ဘက် သဘော တူရွေး ချယ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုင်ရာ အတတ်ပ ညာ အကူ အညီကို နိုင်ငံ တကာမှ တောင်းခံ လေ့ကျင့် သင်ကြား စေပြီးမှ တာဝန်ထမ်း ဆောင်စေ မည်ဆိုလျှင်မူ မျှ တ မှုရှိနိုင် ပါမည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို တစုံတရာ ထိရောက် စွာ အထောက် အကူပြုနိုင်ပါမည်။
(၆) ရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန် ထမ်းဆောင် ရမည့်နေရာ “အပစ်ရပ် နယ် မြေအတွင်း”ဟူသော ဝေါဟာရ မှာေ၀၀ါး မှုရှိသည်။ မည် သည့် နယ်မြေမှာ အပစ်ရပ် နယ်မြေ ဖစ် သည်ကို သတ်မှတ်ရ ခက်ခဲသည်။ တနိုင်ငံလုံး ကို လွှမ်းခြုံ ကာဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ဖေါ်ဆောင် မည်ဆို ပါက နယ်မြေကို ခွဲခြား သတ်မှတ် ရန်မသင့်ပါ။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို အထောက် အ ကူပြု စေရေး အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ အားပြုပြင် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်း မည်ဆို လျှင် ပြည်နယ် အားလုံး၊ ပြည်ထောင် စုနိုင်ငံ တ၀ှမ်း လုံး တွင် ဖေါ်ဆောင် ရန် လိုပါမည်။
(၇) ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက် ပါက ပြည်နယ် အသီးသီး အား ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးရပါ မည်။ ပြည် နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ သည်ပြည်နယ် အစိုးရ၏ ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိရပါ မည်။ ပြည်နယ် အစိုးရ အားပြည်နယ် အတွင်းရှိ တိုင်း ရင်းသား လူထုများက ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံ ရသူများ နှင့်ဖွဲ့စည်း ရန် လို ပါမည်။
(၈) တိုင်းရင်း သားပြည်နယ် များတွင် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ် ရေး ရခွင့်ရှိ သည်ကိုလက်ခံမည် ဆိုလျှင် မြန်မာ နိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့ကိုနှစ်ပိုင်း ခွဲရပါမည်။တပိုင်းမှာ ဖက်ဒ ရယ် ရဲတပ် ဖွဲ့ ဖြစ် သည်။ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင် စု အစိုးရ ၏ ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ထားရှိပြီး ပြည်နယ် တခုမှ အခြား ပြည်နယ် တခုကို ဖြတ်သန်း ကျော် လွှား ဖြစ်ပွားနိုင် သည့်ပြစ်မှု ကြီး များ အား အရေးယူ ကိုင်တွယ် ရန်ဖြစ်သည်။ နောက် တပိုင်းမှာ ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ် အစိုးရ၏ တိုက် ရိုက် ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ထားရှိပြီး ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွား သည့် ပြစ်မှု များကို အရေးယူ ကိုင်တွယ် ရန် ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အခြေ အနေ (၈) ရပ်နှင့် ပြည့်စုံ ပါမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များ တွင်ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို စစ်မှန်စွာ အထောက် အကူပြုနိုင် ပါမည်။ ထို့ အပြင်ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အတွက် ပို၍ အရေးကြီး သည်မှာ တရား စီရင် ရေး ကဏ္ဍဖြစ် သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ မည်မျှပင် ကောင်းမွန် စေဦး လွတ်လပ် ဘက်မလိုက် ထက်မြက်သော တရား စီရင်ရေး မရှိပါက ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အုတ် မြစ်ချနိုင် ဘွယ် မရှိပါ။ နိုင်ငံ တကာ ရှေ့နေအသင်း ချုပ်မှ ဥပဒေ ပညာ ရှင်များ မြန် မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လေ့လာပြီး နောက် လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင် ရေး ပေါ်ပေါက်လာ စေရန် တရား သူကြီး များ အားခန့် အပ်ခြင်းကို သီးခြား လွတ်လပ် သည့် တရားစီရင် ရေးဆိုင်ရာ ခန့်အပ်ရေး ကော်မရှင် က လုပ်ဆောင်သင့် ကြောင်း အကြံပေး ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တရား သူကြီးများ ၏ ရာထူး နေရာ တည်မြဲမှု ကိုလည်း အာမခံရန် လိုပါ မည်။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၃ (၂) ပြဌာန်း ချက် မျိုးဖြင့် အာမခံ ထား မှသာ တရားသူကြီး များ လွတ် လပ်စွာ စီရင်နိုင် ပါမည်။ သို့မှသာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံကို တည်ဆောက် နိုင်ပါမည်။
လွတ်လပ် သော တရား စီရင် ရေးဆိုင်ရာ များသည် ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်နှင့် မဆိုင်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ထည့် သွင်းပြဌာန်း ရမည့် အရာများ ဟုအ ချို့ ကယူဆနိုင် သည်။ ဤသည် ကို ရှင်းပါမည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ် များ တွင်အရေး အကြီးဆုံးများ အနက် တရပ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် များကို ဖေါ်ေ ဆာင် နေစဉ် အတွင်း ပဋိပက္ခ၏ ဘက်နှစ် ဘက်ထပ်မံ ပြဿနာ ဖြစ်လာပါက အကြမ်းဘက် လက်နက် ကိုင် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် မပေါ်ပေါက် အောင် မည် သို့ ဖြေရှင်း မည်ဟူသည် ကို ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုကြ ရသည်။
သာဓက အားဖြင့် ဗြိတိန် အစိုးရနှင့် မြောက် ပိုင်း အိုင် ယာလန်တို့ ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ အခန်း ကဏ္ဍကိုထည့်သွင်း ဖေါ်ပြထား သည်။ မြောက်ပိုင်း အိုင် ယာလန်သည် ဒီမိုကရေ စီအခြေခံ သော နိုင်ငံဖြစ် သည့်အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် စစ်တပ် ၏ထိန်းချုပ်မှု အောက် တွင်မ ရှိ၊ နိုင်ငံရေး အရ အသုံးချ ရန် ရည်မှန်း ချက်နှင့်တပ်မတော် အရာရှိများ အား တိုက်ရိုက် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ပေး ထား ခြင်းလည်း မရှိ၊ရိုးရိုး ရဲ အနေဖြင့် ဘက်လိုက်မှု မရှိဘဲ အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း အ ရ တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန် လေ့ကျင့် ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့်သာ ဖွဲ့စည်းထား သဖြင့်အခြေခံ အားဖြင့် သင့်လျှော်မှု ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့ရာ တွင်မြန် မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေ အထား မှာမူ ယင်းနှင့် ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေသည်။
ယင်းမြောက် ပိုင်း အိုင်ယာလန် မှာ ပင် ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်း ရာတွင် မူလ ရှိပြီးသော ရဲ၏ အနေ အထားကို မလုံ လောက် သေးဟု ယူဆ သဖြင့် ရဲလုပ်ငန်း တိုးတက်အောင် ကြပ်မတ် ပေးရန် ကျွမ်းကျင် သူများ (နိုင်ငံတကာအပါ အ၀င်)ပါဝင်စေ လျက် လွတ်လပ်သည့် ကော်မရှင် တရပ် ထပ်ဖွဲ့ရေး ကို စာချုပ်တွင် ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုရ သည်။  ထို့အပြင် တည်ရှိပြီး သားပြစ်မှု ဆိုင်ရာ တရားမျှ တမှု ရှာဖွေသည့် စနစ် ပိုမိုကောင်း မွန်ရေး၊ တရား စီရင်ရေး လွတ် လပ်မှု ကို ကာကွယ်နိုင် ရေးအတွက် တရားသူကြီး များအား ခန့်ထား နိုင်ရေး စီစဉ်မှုများ နှင့် တရားစွဲ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ယင်း၏ လွတ်လပ်မှု ကို ကာကွယ် နိုင်ရေး စီစဉ်မှုများကို ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုခဲ့ရ သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရား မျှတမှုရှာဖွေမှု စနစ်၊ တရားစီရင် ရေး လွတ်လပ် မှုနှင့် တရားစွဲ အဖွဲ့တို့၏ အခြေ အနေ မှာရစရာ မရှိအောင် ဆိုးဝါး ကျဆင်း လျက်ရှိ သည်။ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေက ပိုဆိုး အောင်သာ အုတ်မြစ် ချပေး ထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်တွင် မြောက်ပိုင်း အိုင်ယာလန် ၏ နမူနာကို ယူကာလက်ရှိရဲ တပ် ဖွဲ့အားပြုပြင် ဖွဲ့ စည်းခြင်း မရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင် လောက်သည့် အခြေအနေ မရှိ။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ကေအိုင်အို နှင့် အစိုးရ အကြား အပစ်ရပ် စာချုပ် ချုပ်ခဲ့ရာ ၌ ပြစ်မှုကျူး လွန်မှုများ ဖြစ်ပွား ပါက နှစ်ဘက် သဘော တူ တည်ေ ဆာက် ထားသော မည်သည့် ဖွဲ့စည်းမှု ယန္တယား က မည်သို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် ဟူသည် ကိုတိတိ ကျကျမ ပါရှိခဲ့။ “ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်း သွားရန်” ဟူသည့် မရေရာ သော ဝေါဟာရ သာ ပါခဲ့သည်။သို့ဖြစ်၍ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ၁၇ နှစ်တာ အပစ်ရပ်ခဲ့ သည့်ကာလအ တွင်း ကေအိုင်အို စစ် သား များ သည် အစိုးရ စစ်တပ်၏ သတ်ဖြတ်မှု များကို အတော် များများ ခံခဲ့ကြရ သော်လည်းအပစ်ရပ် စာချုပ်ကို ကိုးကား ကိုင် စွဲ၍ ထိရောက်စွာ အရေး ယူ ဆောင် ရွက် နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ပျက်သုဉ်းမှု ကိုကေအိုင်အို သည်ကြိတ် ၍ ခံခဲ့ရသည်။ ခုနှစ်ကို တော့ မမှတ်မိ တော့ပါ။ ဒီမိုကရက် တစ် ကရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ တပ်မတော် မှ စစ်သည် (၆) ဦးကို လည်းမြန်မာ့ တပ်မတော် က သတ်ဖြတ်ခဲ့ ဘူးသည်။ မွန်ပြည်သစ် ပါတီနှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်း များတွင် လည်းအ လား တူ အတွေ့ အကြုံများ မနည်းလှ။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ န၀တ စစ်အစိုးရ က ဖေါ်ဆောင်ခဲ့ သည့်အပစ် အခတ်ရပ်စဲ ရေးသမိုင်း တွင် စစ်အစိုးရ ကျူး လွန်ခဲ့သည့်အရုပ်ဆိုး အကျည်း အတန် ဆုံး နှင့် အရက်စက် ဆုံး ရာဇ၀တ်မှု ကြီးမှာ မုန်းကိုးလူသတ်ပွဲ ကြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မတ်လ (၁၂) ရက်နေ့ တွင်ဖုန်ကျားရှင် ခေါင်းဆောင်သော ကိုးကန့် အဖွဲ့သည် ဗကပကို ပုန်ကန်ခွဲ ထွက် ကာ န၀တစစ်အစိုးရ နှင့် အပစ်ရပ်ခဲ့ သည့် ပထမဆုံး အဖွဲ့ကြီးဖြစ် သည်။ အဆိုးဝါး ဆုံးသောအတွေ့ အကြုံကိုလည်း ပထမ ဆုံး ခံစားခဲ့ရ သည်။
၄င်းအဖွဲ့လွှမ်းမိုးထား သည့် ဒေသမှာ လောက်ကိုင်၊ ချင်းရွှေဟော် တို့မှနေ ၍ မုန်းကိုး အထိကျယ်ပြန့် ပြီး စစ်အစိုးရ က ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း အထူးဒေသ (၁) အဖြစ် သတ်မှတ်ပေး ခဲ့ သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ၄င်းအဖွဲ့ အတွင်း'ဖုန်' မျိုး နွယ်စု က ဖုန်ကျား ရှင်၊ ဖုန်ကျားဖူ၊ ဖုန်တာရှင်း တို့ ခေါင်းဆောင် သောအုပ်စုနှင့်'ရန်' မျိုးနွယ်တွေ ထဲက ရန်မိုး လျှံ၊ ရန်မိုးအန်း၊ ရန်ကျုံးဝေ၊ ရန်ကျုံးစီ တို့ ခေါင်းဆောင် သော အုပ်စုတို့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ကြသော အခါ ဖုန်ကျားရှင် အုပ်စုက အသာစီး ရသွားခဲ့ သည်။ ဖုန်ဘက်က ထောက်ကူ ရင်း စစ်အစိုးရ ၏ 'ဒကစ' စစ်တပ်ကြီး ရောက်လာ သောအခါ နှစ် ဘက် လုံးက လက်ခံခဲ့ ရသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အောက် တို ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့ တွင်မုန်းကိုး ခေါင်း ဆောင်မုန်ဆာလ ကို ဖယ်ရှားပြီး လီနင်မင် ခေါင်း ဆောင်သည့် အုပ်စုက အာဏာ သိမ်းရန် ကြိုးစားသော အခါ စစ်အစိုးရ ၏ မြန်မာ့ တပ် မတော်က ၀င်ရောက် တရားစီရင် ပါတော့ သည်။ လီနင်မင် အပါ အ၀င် ၄င်း၏ အုပ်စု တခုလုံး လူ ၁၅၀ခန့်အား 'ဟေ မိုးလုံ' ဒေသ တွင် တချီတည်း အသေ ပစ်သတ်ကာ ဧရာမ ကျင်းကြီး များ အတွင်း တွင်အစု လိုက် အပြုံလိုက် မြှုပ်နှံ လိုက်သည် ။ဒေသခံ များနှင့် တရုတ် နွယ်ဖွားများ က 'ဒုတိယ နန်ကျင်း လူသတ်ပွဲကြီး' ဟု ပင်ဆို စမှတ်ပြုခဲ့သည်။ 
ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖြစ်စဉ်များ သည် လူ့အခွင့် အရေးကို တိုးမြင့် စေရပါ မည်။ ပိုမို၍ ဆုတ်ယုတ် ကျ ဆင်းခြင်း မျိုးမဖြစ် သင့်ပါ။ အပစ်ရပ် ခဲ့သော တိုင်းရင်း သား စစ်သည်များ ၏ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်မှု အားကြိုက် သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက် သည်ဖြစ် စေ ၄င်းတို့တွင် လူ့အခွင့် အရေးအရအသက်ရှင် သန်ပိုင်ခွင့်  ရှိသည်။ ထိုနည်း တူစွာ မြန်မာ့ တပ်မ တော်ရှိ စစ်သည် များတွင် လည်း အလားတူ အခွင့် အရေးရှိ သည်။ ဥပဒေ အရ တရား စီရင်မှုဖြင့် ရုပ်သိမ်းခြင်း မှ တပါး ၄င်းတို့ ၏ အသက်ရှင် သန်ပိုင် ခွင့် အခွင့်အရေး ကို မည်သူမျှ ရုပ်သိမ်းခွင့် မရှိ။ အပစ်ရပ် ထားစဉ် အတွင်းဖြစ် စေကာမူ ပဋိပက္ခဖြစ် ပွားနေ သော ဘက် တဘက်က ဖမ်းဆီး ရမိထားသော အခြားဘက် တဘက်မှ စစ် သည်တဦး ၏ အသက်ရှင် သန်ပိုင်ခွင့် ကိုရုပ် သိမ်းခြင်း မှာ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထား သည့် နိုင်ငံတကာ ဥပ ဒေ ဖြစ်သည့် ဂျီနီဗာ ကွန်ဗင်း ရှင်း ပုဒ်မ (၃) အရ စစ်ရာ ဇ၀တ်မှု ကျူး လွန်ခြင်း ပင်ဖြစ် သည်။ အပစ်ရပ် ထား စဉ် အတွင်း မြန်မာ့ တပ်မတော် က တိုင်း ရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များရှိ စစ်သည်များ အား သတ်ဖြတ် မှုမှန် သမျှမှာ စစ်ရာဇ၀တ် မှုကျူး လွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ် သည် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို မျက် ကွယ်ပြုခွင့် ပေးထားသည် သဘော တူညီချက် မဖြစ် သင့်။ဥပ ဒေ စိုးမိုးရေး ကို ခိုင်မာစွာ အုတ်မြစ်ချ သည့် စာ ချုပ် ဖြစ်သင့်သည် ။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ရှိမှ သာ လူ့အခွင့် အရေး ကို ခံ စား ခွင့် ရနိုင်သော ကြောင့်ဖြစ် သည်။ နိုင်ငံ တကာ စံထားချက် များ အခြေခံ အပေါ်တွင် ဥပဒေ အထောက် အကူ ပြုကွန် ရက် က လက်ခံထား သည့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး အခြေခံ မူနံပါတ် (၁) မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။
ပြစ်မှုကျူး လွန်သူကို အရေးယူ အပြစ်ပေးရေး နှင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခံရ သူ များ တရားမျှတ မှုရှိစေရေးအနိမ့် ဆုံး အ ခြေခံမှ နေ၍ လူတိုင်း ဥပဒေ ရှေ့မှောက် တွင် တန်းတူရေး ကို ကျင့်သုံးခြင်း။
အစိုးရ အဆိုပြု စာချုပ်နိဒါန်းတွင် ဖေါ်ပြထား သည့် “အတိတ်ဖြစ် ရပ်များ အပေါ် တဦးနှင့် တဦး အပစ်မတင်ဘဲ” ဟူ သော ဝေါဟာ ရသည်ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို လုံးဝ မျက်ကွယ်ပြု ထားခြင်းဖြစ် သည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကိုအဓိက ထား လျှင် ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူကို ဖေါ်ထုတ် အရေးယူ အပြစ်ပေး ရပါမည်။
အကြောင်း ကြောင်းကြောင့်ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ ကို ဖေါ်ထုတ် အရေးယူ အပြစ် ပေးခြင်း မပြုလျှင် ပင်ပြစ်မှု ကျူးလွန် ခံရသူများ အတွက် တရားမျှ တမှု ရရှိစေရန် ကုစား နည်းမျိုး စုံဖြင့် ကုစားပေး ရပါသည်။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု အား လျော် ကြေး ငွေများ ပေးအပ်ခြင်း၊ ဂုဏ်ပြု ကျောက်စာတိုင် များစိုက်ထူ ပေးခြင်း၊ မှတ် တမ်း စာအုပ်များ ထုတ်ဝေခြင်း၊ တိုင်းပြည် အဆောက် အအုံများ ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ “အမှန်တရား ဖေါ်ထုတ်ရေး နှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး” ကော်မရှင် များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း သည်လည်း နည်းလမ်း တခုဖြစ်သည်။
ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ဘက်နှစ် ဘက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ကြပြီး နောက်တောင် အာဖရိက၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ အာချေး၊ ဆီအာရာ လီယွန်း နိုင်ငံ၊ အယ်လ် ဆာ ဗေးဒေါ၊ ကင်ညာ၊ လိုက်ဘေး ရီးယား၊ ပနားမား၊ ပီရူး၊ အရှေ့တီမော စသော နိုင်ငံများ တွင်အမှန် တရားဖေါ်ထုတ် ရေးနှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်ေ ရး ကော်မရှင် များဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။ ယူဂို ဆလား ဗီယားနိုင်ငံ ပြိုကွဲ သွားပြီးေ နာက်ပေါ်ပေါက် လာသည့် ၆ နိုင်ငံလုံး သည် စုပေါင်းကာ အလား တူ ကော်မ ရှင် မျိုးဖွဲ့စည်း ရန် ကြိုးပမ်း လျက် ရှိကြသည်။ ယင်း သို့ ဆောင်ရွက်မှု များမှာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို တနည်း တဖုံ အ ထောက် အကူပြုစေ ပါသည်။ မြန် မာနိုင်ငံ တွင် အစိုးရ အဆိုပြု စာချုပ်၌အတိတ် က လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖေါက် ကျူး လွန် ခံခဲ့ရ သူများ တရား မျှတမှုခံစားနိုင် ရေး အတွက် အရေးယူ ဆောင်ရွက် ရန် မည်သို့မျှ ဖေါ်ပြ မထားခြင်း မှာလူ သား စိတ်ကင်း မဲ့ရာ ရောက်သည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကို လည်းလုံးဝ မျက်ကွယ်ပြု ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရ အဆိုပြု စာချုပ်တွင် စာချုပ် လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီးသည့် နေ့မှစ၍ ဖေါ်ဆောင် မည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် များ အပေါ် ကြီးကြပ် ရန် သော်လည်း ကောင်း၊ ဘက် နှစ် ဘက် အတွင်းပြန် လည်ဖြစ်ပွား ပေါ်ပေါက်နိုင် မည့် ပြသနာများ၊ အ ကြမ်း ဘက်ပဋိ ပက္ခများ အား စနစ်တကျ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်သော် လည်း ကောင်းဖေါ်ပြ ထားချက် များ မှာ အား နည်းလွန်း လှသည်။ စင်စစ် အားဖြင့် ယေဘုယျ ဆန်လွန်းသော နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေး ပွဲ ဟူသည့် ဝေါဟာရ မှ လွဲ၍ တိကျ သည့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် များပင် စိုးစဉ်းမျှ မတွေ့ ၇။ ၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းပုံ အောက်သို့ ပြန်လည် ဆွဲ သွင်း ထားသည့် အပြင် နိုင်ငံ တကာ၏ အခန်း ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းခြင်း လုံးဝမရှိ။ ပြသနာ များကို ငြိမ်းချမ်း စွာ ဖြေ ရှင်း နိုင်ရန် စစ်မီးများ ပြန်လည် မတောက် လောင်စေရန် နှင့်လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များအား ရပ်ဆိုင်းနိုင် ရန် နိုင် ငံ တကာ၏ ကြီးကြပ် မှုကို ဖိတ်ခေါ်သင့်သည်။
ကင်ညာ နိုင်ငံ အတွင်း၌ ပဋိပက္ခ များ ဖြစ်ပွား ခဲ့သော အခါ ရက် သတ္တပတ် အချို့အတွင်းမှာ အာဖရိက သမဂ္ဂ ဥက္ကဌဂျွန်ကူး ဖူး သည် ကင်ညာ နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ ကာ ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သည်။ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားပြီး ရက် သတ္တ ပတ် အချို့မျှ အကြာမှာ ပင်၂၀၀၈ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့၌ ကုလ သမဂ္ဂ အ တွင်း ရေးမူးချုပ် ဟောင်း ကိုဖီအာနန် ကမစ်ရှင် တခုကို ခေါင်းဆောင် ၍ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ လ ၂၈ရက်နေ့တွင် အာဏာ ခွဲဝေ ရေး သဘောတူ ညီချက်ကို လက်မှတ်ရေး ထိုးနိုင် ခဲ့ကြ သည်။ မတ်လ ၆ရက်နေ့တွင် ဥပဒေ ထွက်လာ သည်။ ပဋိပက္ခ များငြိမ်သွားခဲ့ သည်။ ညှိနိုင်း စေ့စပ် သူများ အိမ်ပြန် သွားခဲ့သည်။ အာဖရိက သမဂ္ဂ၏ ကြားဝင်ကြိုး ပမ်းမှု အောင်မြင် သည့် အနေအထား သို့ရောက်သွား ခဲ့သည်။နိုင်ငံ တကာက သံတမန်ရေး အရ ၀င်ေ ရာက် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ပေးမှုကို လက်ခံ ခြင်းမှာမည်မျှ ထိရောက် ကြောင်း သာဓက ဖြစ်သည်။
ကင်ညာ နိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်း ရေး ညှိနိုင်းမှု ဖြစ်စဉ် အတွင်း ရရှိခဲ့သည့် စံနမူနာယူထိုက် သောသဘော တူညီချက် များ မှာ ပဋိပက္ခ များ ဘာကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည် ကိုဖေါ်ထုတ်စုံ စမ်းစစ်ဆေး ရန်၊ ရွေးကောက် ပွဲဖြစ်စဉ်များ ကိုပြန်လည် သုံး သပ်ရန် နှင့် လူထုအ တွင်း အမှန် တရား၊ တရားမျှ တမှု နှင့်ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်း များဖေါ် ဆောင်ရန် စသည်တို့ အတွက် ကော်မရှင် များအသီးသီး ဖွဲ့စည်း ပေးနိုင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီး ရှားနိုင်ငံအာချေး ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖြစ်စဉ်တွင် အီးယူနှင့် အာဆီယံ တို့ သည် ကြီးကြပ်မှု အခန်း ကဏ္ဍတွင် ပါ ၀င်ခဲ့ကြပြီး မည်သို့ မည်ပုံ ကြီးကြပ် မည်ကို စာချုပ် ၌အသေးစိပ် စာနှစ် မျက်နှာ ခန့်မျှ ထည့်သွင်း ချုပ် ဆိုခဲ့ သည် ။ ဆီအာရာ လီယွန်း သဘောတူ စာချုပ်တွင် ပူးတွဲ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ ကို အနောက် အာဖရိက ၁၅ နိုင်ငံ ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းထား သည့် ECOWASက ဥက္ကဌ တာဝန် ယူမှု အောက်တွင် ဖွဲ့ စည်းပြီး၊ နိုင်ငံ တကာ၏ ပါဝင်ပတ် သက်မှု ကိုတောင်းခံ ကြောင်းနှင့် ဤငြိမ်းချမ်း ရေးစာချုပ်အား ဘက်နှစ်ဘက် သဘော ရိုးနှင့်ခိုင် ကျည်စွာ ဖေါ် ဆောင်ရာ တွင် ကုလသ မဂ္ဂ၊ အာဖရိက သမဂ္ဂ OAU နှင့် ECOWAS တို့က ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာအရ အာမခံသူ များ အနေဖြင့် တာဝန်ယူ ကြောင်း စသည်တို့ ကိုဖေါ်ပြခဲ့သည်။
 Law Enforcement Institutions  StateInstitutions ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၂၀၁၃နိုဝင်္ဘာလ ၂၁ ရက် နေ့ တွင်ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ် ဥပဒေ ပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ ဆိုင်မွန်ယန်း (ဥပဒေ အထောက် အကူပြု ကွန်ရက် LAN ၏ နိုင်ငံ တကာ အကြံပေး ဘုတ်အဖွဲ့ ဝင်) ပေးပို့သော မှတ်ချက်။ “The police force is responsible for law enforcements inaccordance with international human rights standards.”
 မဂျာဆိုင်း အိန်အမှု၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ တွင်မြောက်ပိုင်း တိုင်း လက်အောက်ခံ ဟိုပင် အခြေစိုက် တပ်ရင်း(၃၈၉) ကဖားကန့်မြို့ ဆွတ် ငိုင်ယန် ကျေးရွာ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက် ပစ်ခတ်သဖြင့် အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ် ကိုးတန်း ကျောင်းသူ ကချင် အမျိုး သမီးကလေး မဂျာဆိုင်း အိန်ကွယ်လွန် သွား ခဲ့။ အသိ သက်သေများ တရွာ လုံးတွင်ရှိ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကမည် သည့်အရေးယူ မှုမျှ မလုပ်ခဲ့။ သူမ၏ ဖခင်ကလူ့ အခွင့် အရေးကော် မရှင် သို့ တိုင်ကြား သောအခါ မမှန်မကန် တိုင်ကြားသည်ဟု စစ်တပ်ကပြန်လည် အမှုဖွင့်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ က တိုင်ချက် ကိုလက်ခံ၊ ဖခင် ဦးဘရန် ရှောင်မှာဖားကန့် မြို့နယ် တရားရုံး တွင် ယခုတိုင် အမှုရင် ဆိုင်နေရ။
 Civilian Supremacy  Neutrality ofpolice ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း ၆ ပုဒ်မ ၂၉၃ အရ စစ်ဘက် ဆိုင်ရာတရားရုံး များဖွဲ့ စည်း ထားခြင်း၊ပုဒ်မ ၃၄၃ “စစ်ဘက်ဆိုင် ရာ တရား စီရင်ရေး တွင်တပ်မတော် ကာ ကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ၏ အဆုံး အဖြတ်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်သည်။” ဟုပြဌာန်း ထားခြင်း။
 Courts-Martial  Military Tribunals ၁၉၅၉ ခုနှစ် တပ်မတော် အက်ဥပဒေ အခဏ်း (၁၇) ပုဒ်မ (၂၁၁) ။“စစ် ဘက် အယူခံ တရားရုံးဖွဲ့ စည်းခြင်း” “စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ အယူခံ ရုံးတရုံး ရှိရမည်။ ထိုစစ်ဘက် ဆိုင်ရာ အယူခံ ရုံး ၏ တရား သူကြီးများ သည် အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။ (က) နိုင်ငံတော် တရား ၀န်ကြီး ချုပ်က ဤကိစ္စ အလို့ ငှာ တရား လွှတ်တော် ၀န်ကြီးများ ထဲမှ အခါအား လျော်စွာ ရွေးချယ်သော တရားလွှတ် တော်တရား ၀န်ကြီးများ၊(ခ) နိုင် ငံတော် တရား ၀န်ကြီးချုပ် က ဤကိစ္စ အလို့ငှာ တပ်မတော် ရှိ ဒုတိယ ဗိုလ်မှုးကြီး အောက် အဆင့် မနိမ့်သော အရာရှိများ ထဲမှ အခါအားလျော်စွာ ရွေးချယ်သော အရာရှိများ၊(ဂ) အစိုးရ ၀န်ထမ်း မဟုတ်သည့် ဥပဒေ ကျွမ်းကျင် သူများထဲမှ နိုင်ငံတော် တရား ၀န်ကြီးချုပ် က ခန့် အပ်သူများ၊”
 Institutional Reform  International Bar Association  Judicial Appointments Commission  Judicial tenure ၁၉၄၇ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၃ (၂) “ထင်ရှား သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး သည့် အကျင့် စာရိတ္တ ပျက်ပြားမှု ကြောင့်ဖြစ် စေ၊ မစွမ်းမ ဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ထိုအကြောင်း တခုခုကြောင့် မှတ ပါး တရား ၀န်ကြီးကိုရာထူးမှ မထုတ်ပယ်ရ။”
 Professional The UK Government and theNorthern Ireland Agreement: Policing and Justice; P. 26Criminal Justice  The arrangements for making appointments to thejudiciary and magistracy, and safeguards for protecting their independence; The arrangements for the organisation and supervision of the prosecutionprocess, and for safeguarding its independence;
၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ် ၀ါရီလ ၂၄ ရက်။“နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိ ပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ ၏ ကိုယ်စား လှယ် အဖွဲ့ နှင့် ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တို့ ၏ နှစ်ဦး နှစ်ဘက် နားလည် သဘော တူညီချက်များ”
အပုဒ် (၄) (ည)။ “ကေအိုင်အို တပ်ဖွဲ့ များအခြေပြု တပ်စွဲသည့် နေရာ ဒေသများ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ သော်လည်း ကောင်း၊အခြားရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည့် ကိစ္စရပ် တခုခု ပေါ်ပေါက် လာလျှင်သော် လည်း ကောင်း နှစ်ဦး နှစ်ဘက် အတူ တကွ ကွင်းဆင်း လေ့လာပြီး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း သွားရန်”
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဖါးကန့်ခရိုင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၆ မှ တပ်ဖွဲ့ ဝင်သုံး ဦးအား အစိုးရ တပ်က ဖမ်းဆီး သတ် ဖြတ်။၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင် ခရိုင် ဂျာအိန်ပါ ကျေးရွာကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၉ နယ်မြှေ စိုက်ပျိုး ရေးခြံကို အစိုးရ တပ်က၀င်ရောက် စီးနင်းပြီး တပ်ဖွဲ့ ဝင် ၁၄ ဦးအား သတ်ဖြတ်။၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မူဆယ်- နမ့်ခမ်း လမ်းပေါ် ရှိ နမ့်မြဲကျေး ရွာကေအိုင်အေ တပ်ခွဲမှ တပ်ဖွဲ့ ဝင် ၉ ဦးအား အစိုးရ တပ်က၀င်ရောက် စီးနင်း သတ် ဖြတ်။
မျိုးဇေ ရေးသား သည့် ဆောင်းပါး၊ “စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဟာ အပေါင်း လက္ခဏာ၊ အတု အယောင်ငြိမ်း ချမ်း ရေး ကတော့ အနုတ် လက္ခဏာ” ၃၁-၈-၀၉
 The Right to Life Party in the armed conflict  Legal Comment made by Dr. David Fisher, Professor of International Law,Faculty of Law, Stockholm University, Sweden. He is alsoamember of theInternational Advisory Board to the Legal Aid Network (LAN):“Under common Article 3(1) of the Geneva Conventions, persons taking no activepart in the hostilities, including members of the armed forces who have laiddown their arms and those placed hors de combat by, forexample, detention are entitled to be treated humanely.“Violence to life and person, in particular murder of all kinds” is prohibitedunder the Article. It would not seem to matter that the killings of the warprisoners have taken place whileacease-fire agreement was in force. In otherwords, the mere existence of such an agreement would not remove the killingsfrom the context of the armed conflict. In fact, the very fact that thekillings took place indicates that the conflict is still in existence (andthus that Article3is applicable). In summary, the acts in question may verywell constitute war crimes, i.e., breaches of international humanitarian lawunder Article 3.”
 Legal Aid Network  Institutional Reform  Comment made by Dr Venkat Iyer, theUK-based Law Commissioner for Northern Ireland and member of InternationalAdvisory Board to the Legal Aid Network (LAN) on January 2, 2014: Among the issues that have noteither featured in the agreement or have not been sufficiently fleshed out aretwo very important ones:
(a) details of how theimplementation of the agreement is to be monitored/enforced; and
(b) an arbitration clause forthe resolution of disputes that may arise.
အစိုးရအဆိုပြုစာချုပ် အခန်း (၉) အပုဒ် (၁၅)အစိုးရအဆိုပြုစာချုပ် အခန်း(၈) အပုဒ်၁၂ (ဂ) နှင့် ၁၃။ Kenya National Accord and Reconciliation Bill 2008 https://drive.google.com/file/d/0BzC8VZhwp11AaHFlYk1hbDFod1hYRkYxRzYzQk84bHhrU2d3/edit?usp=sharing Indonesia Aceh Agreement, P. 5-7: https://drive.google.com/file/d/0BzC8VZhwp11AXzd6cVQ1Yk1kZFNmX3BjajFobTRRdm13RW5V/edit?usp=sharing The Economic Community Of West African States (ECOWAS)  Sierra Leone Agreement, P. 17:
at 1/23/2014 09:02:00 AM